यसकारण भयो दाङमा प्रदर्शन – Vision Khabar
यसकारण भयो दाङमा प्रदर्शन
। २ माघ २०७४, मंगलवार १९:४७ मा प्रकाशित
माघ २, दाङ । राजधानी माग गर्दै दाङबासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
प्रदेश नं. ५ को प्रदेश राजधानी दाङको विकल्प अन्यत्र खोज्न थालिएको हल्ला भएपछि दाङमा प्रदर्शन सुरू भएको हो।
प्रदर्शनले मंगलबार दिउँसो २ बजेदेखि ४ बजेसम्म यहाँको यातायात, बजार, कलकारखाना उद्योग धन्द सबै ठप्प हुन पुगेको थियो। पूर्वपश्चिम राजमार्गमा समेत यातायातका साधन सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। तुलसीपुरमा नेपाली कांग्रेसको झन्डासहित प्रदर्शन भइरहेको छ।
वीपी चोकमा टायर बालिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले दाङको विकल्प अन्यत्र खोज्नु गलत भएको बताए। ‘दाङ प्रदेश राजधानीको लागि सबैभन्दा उपयुक्त स्थान हो र यसको विकल्प खोज्ने दुर्भाग्य हुनेछ’ चौधरीले फोनमा सेतोपाटीलाई भने। त्यसपूर्व तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघले बजारमा विरोध प्रदर्शन गरिएको थियो ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष विरेन्द्र शाहले दाङलाई प्रदेश राजधानी नबनाउने षडयन्त्रका विरुद्ध सबै दाङबासी एक ढिक्का भएर आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने बताए ।
‘दाङ राजधानी नहुने संकेत देखिएपछि स्व:स्फूर्त रुपमा प्रदर्शन भएको हो,’ कांग्रेसका नेता समेत रहेका शाहले भने। त्यसैगरी, दाङ प्रादेशिक सरोकार समितिको अगुवाइमा घोराहीमा पनि बजार र यातायात बन्द गरिएको छ।
दाङ प्रादेशिक राजधानी सरोकार समितिका सदस्य सचिव एवं नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष सविन प्रियासनले दाङ राजधानीको विकल्प अन्यत्र खोज्न नसकिने बताए। आन्दोलनका कारण पूर्व पश्चिम राजमार्ग ठप्प भएको छ ।